Inona no tokony ho fantatro momba ny tranokalan'ny backlink tranonkala mba hanatsarana ny SEO?
Alohan'ny zavatra hafa rehetra, andeha aloha hanomboka amin'ny fototra. Ireto misy telo karazana rohy mampifandray ny tranokalanao backlink tokony ho liana amin'ny fanatsarana ny fandrosoana SEO anao amin'ny ankapobeny. Noho izany, raha ny tena izy dia tokony ho fantatrao ny karazana rohy ahafahanao mampiditra ao amin'ny rohy momba ny rohim-pejyo - ny sasany amin'izy ireo dia miasa ho an'ny tanjona SEO, fa ny sisa dia tsy mitondra fiantraikany be loatra amin'ny fifamoivoizanao sy ny fijerena tsara kokoa amin'ny fikarohana an-tserasera, farafaharatsiny mivantana.
Isaky ny Site Backlink Profile natonta miaraka:
Fifandraisana anatiny - mampifandray pejy sy fizarana samihafa ao anaty tranonkala iray na blôgy. Amin'ny lafiny iray, rohy anaty dia ilaina ho an'ny logic tsara amin'ny tranokala tranonkala izay hanao ny tsara fa tsy ho an'ny mpampiasa marika tsaratsara kokoa, fa mety ho tsara kokoa ho an'ny fampidinana haingana kokoa sy bebe kokoa amin'ny boot crawling search. Etsy ankilany kosa anefa, ny filaminana fototra iray amin'ny fototra dia mety ho fananana tsy miankina amin'ny fanjakana izay afaka manome laza tsara fa mendrika ny aseho amin'ny mpamaky mpihetsiketsika mavitrika. Fanamarihana: Ny rohy anatiny hita ao amin'ny tranonkala backlink rehetra dia tsy misy fiantraikany be loatra amin'ny fiakaran'ny tranonkala, ary koa ny SEO amin'ny ankapobeny. Fa ny fitsipiky ny lalao - ary ny manaraka fitsipika dia mety ho valisoa, farafaharatsiny farafaharatsiny, sa tsy izany?
Ny rohy ivelany - nalaina tamin'ny ankapobeny, ity karazana rohy ity dia ampiasaina tsara amin'ny tanjona SEO. Ny iray amin'ireo hevi-dehibe tsy mitandrina indrindra eo imason'ireo fitaovam-pikarohana lehibe toa an'i Google, sy Yahoo ary Bing, ny rohy ivelany dia mampifandray ireo mpamaky ny tranokalanao na blôginao amin'ny tontolo sisa ao amin'ny Internet. Ary tonga eto ny andian-drakitra mavesa-danja indrindra (toy ny PageRank, ny Domain Authority, ny mpampiasa mpampiasa, ny pejy maoderina, sns.). Noho izany, ny tranonkala backlink ao amin'ny tranonkala dia maniry ny hahalalan'izy ireo azy rehetra amin'ny ambaratonga lehibe indrindra - afaka mamorona fahatsapana mahery vaika amin'ny milina fikarohana izy ireo fa ny tranokala na ny bilaogy toy izany dia mendrika ny maneho eo an-tampon'ireo SERP.
Afaka mifehy an'izao tontolo izao ny rohy mahazatra
Zava-dehibe kokoa noho izay azonao eritreretina. Midika izany fa ny rohy avo lenta miaraka amin'ny taham-pahaizana matanjaka ao amin'ny PageRank sy Domain Authority dia midika fa tsy tompon'andraikitra amin'ny aterineto fotsiny ianao fa azo itokisana sy azo antoka fa ny onjanao manokana dia tena miavaka ary manome lanja be loatra - fa ireo olon-kafa ny tranonkala dia tsy afaka manampy afa-tsy ny mamindra sy mitantana ampahany azo tsidihina amin'ny fifamoivoizan'ny tenany manokana - mivantana amin'ny tranonkalanao na ny blôginao.
Inona no mahatonga ny fichier tsara amin'ny SEO
1. Ny tena marina - midika fa ny rohy rehetra ao amin'ny mombamomba anao dia natsangana soa aman-tsara ary tsy nandray anjara tamin'ny fandoavana vola, sarotra na fatoriana mifandraika amin'ny rohy.
2. Ny maha-zava-dehibe ny fahamendrehana - dia miorina amin'ny fahaizan'izy ireo mifanaraka amin'ny lohahevitra fototra na ny adihevitra ifanakalozan-kevitra mba hahatonga ny fifamoivoizana ara-biôlôjika ampiasaina fotsiny amin'ny lafiny roa amin'ny fifanarahana.
. Manam-pahefana sy fahatokisana - dia toetra manavaka ny tenany, satria ny lalam-pifandraisana rehetra mahavita mampita ny ampahany amin'io jiosy io dia tsy maintsy ho mahery, i. f. , tokony avy amin'ny toerana manana toerana ambony izay manompo tsara ny filan'ireo mpampiasa mivantana Source .